माओवादीको सरकार बन्‍ने प्रदेशमा कवटाल प्रमुख ? — Imandarmedia.com
माओवादीको सरकार बन्‍ने प्रदेशमा कवटाल प्रमुख ?
सरकारले प्रदेश प्रमु्ख नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएका थिए । तर, बैठकमा कुनै सहमति भएन ।
पाँच पार्टीको बैठकमा एमालेले सहमति नदिएपछि सरकारले एक्लैले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
काँग्रेस स्रोतका अनु्सार माओवादी केन्द्रले सरकार चलाउने सम्भावना रहेका ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशमा कटवाललाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । माओवादीसँगको कटवालको पूरानो दुश्‍मनीलाई उपयोग गर्दै सरकारले उपयोग गर्ने बताइएको छ ।